Nero7~ ခိုင်ရဲလင်း(နည်းပညာ)
လို့ရပါတယ် အာမခံ ပါတယ် ... Data ဖိုင်များကို CD/DVD မှာ Burn လုပ်ခြင်း၊ISO ဖိုင်များကို Conbine,Extrat,Archive,Burn လုပ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲ တခုဖြစ်ပါတယ့်  အဟောင်းလေးပါ ..လိုအပ်သူများအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Original from: http://freeitcity.blogspot.com/2014/08/nero-7.html#more
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ. ဒီကောင်လေးကတော့အခုကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ Nero 7. လေးပါ..အရမ်းကောင်း
ပါတယ်..ဘာကီးမှထည့်စရာမလိုပါဘူး..အမြဲသုံးလို့ရပါတယ်.. Data ဖိုင်များကို CD/DVD မှာ Burn လုပ်ခြင်း၊ISO ဖိုင်များကို Conbine,Extrat,Archive,Burn လုပ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲ တခုဖြစ်ပါတယ့်  အဟောင်းလေးပါ ..လိုအပ်သူများအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
Original from: http://freeitcity.blogspot.com/2014/08/nero-7.html?showComment=1409588423945
Data ဖိုင်များကို CD/DVD မှာ Burn လုပ်ခြင်း၊ISO ဖိုင်များကို Conbine,Extrat,Archive,Burn လုပ်ခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲ တခုဖြစ်ပါတယ့်  အဟောင်းလေးပါ ..လိုအပ်သူများအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted in Nero